'Inaan isqarxiyaan ka doorbiday guurka Boko Xaraam' - BBC News Somali
Image caption Inaan isqarxiyaan ka doorbiday guurka Boko Xaraam
Gabadh 14 jir ah oo reer Nigeria ah oo is dhiibtay iyadoo qorshaheedu ahaa in ay isku qarxiso saldhig milatari oo ku yaala gobolka Maiduguri ee waqooyiga Nigeria ku yaalla ayaa sheegtay in ay is qarxinta dooratay ka dib markii ay diiday in ay guursato malayshiyaadka Boko Xaraam, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka ee Nigeria ee magaceeda loo soo gaabiyo NAM.
Waxay sheegtay in la afduubtay iyada iyo aabaheed oo ku sugnaa Gwoza oo ka tirsanayd gobolka Borno sanadkii 2013kii.
"Saddex sano ayaan ku jiray gacmaha Boko Xaraam, saddex nin oo Boko Xaraam ka tirsan ayaa guur iga dalbaday waana diiday, labo ka mid ah taliyeyaal ayay ahaayeen".
Mar saddexaadkii markaan diiday guurka, mid ka mid ah saraakiisha ayaa aad u xanaaqay wuxuuna iigu hanjabay in uu dili doono iyada iyo aabaheedba. Markaas ayaan ku iri in aan dhintaan ka xigaa in aan Boko Xaraam guursado."
'Dagaalyahanno ka tirsan Boko Xaraam ayaa isa soo dhiibay'
Kala qaybsanaanta dhanka hogaanka ee Boko Xaraam-ta Nigeria
Intaas ka dib todobaad markii laga soo wareegay ayay igu dhaheen mar haddii aad diiday guur waxaad aadaysaa Maiduguri si aad uga qaybqaadato hawlgal is qarxin ah, sidaa daraadeed saddex ka mid ah ayaa gacmaha is qabtay irbad ayayna igu dureen."
Wax yar ka dibna waxaa loo sii qaaday xero ciidan iyada iyo weerar yahanno kale, sida ay u sheegtay wakaaladda wararka ee ee NAM.
Mid ka mid ah gabdhihii ayaa is qarxisay kaligeed ayaana ku dhimatay, mid kalena milatariga ayaa toogtay intii aysan is qarxinin, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee NAM.
Intaas ka dibna gabadhii ayaa sheegtay in ay waxyaabihi qarxayay iska bixisay oo ay is dhiibtay.